IDomingo Villar. Ukunikezelwa eMadrid kwesikhephe sokugqibela. I-trilogy yakhe | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, I zi ganeko, Iincwadi, Inoveli emnyama, Ezahlukeneyo
Iifoto (c) Mariola DCA.
NgoMvulo odlulileyo bendikwi ntetho Inqanawa yokugqibela, inoveli entsha yombhali IDomingo Villar, evela eVigo esekwe eMadrid. Ibibanjelwe kwi Ndlu yeGalicia entliziyweni yekomkhulu kwaye zazikhona ngokupheleleyo.
Ilula, ithobekile kwaye igqithisile ngenxa yolwamkelo olukhulu emva kweminyaka eli-10 elinde le ncwadi, uVillar usinike i intetho ekhululekile nabo bonke ububele bakho. Ke iyahamba le nqaku ngaye isenzo nakwenye ezona trilogies zenqaku lolwaphulo-mthetho ukuba ndiyifundile.
1 IGalicia, iDomingo, uLeo, uRafa kunye nam
2 Ukunikezelwa kwesikhephe sokugqibela eMadrid-Matshi 25 -Casa de Galicia
2.1 Inkqubo yokudala
2.2 Imixholo, abalinganiswa, iindlela zokuzonwabisa zombhali
2.3 Indawo yokuphela
3.1 Amehlo amanzi
3.2 Ulwandle lwarhaxwa
3.3 Inqanawa yokugqibela
IGalicia, iDomingo, uLeo, uRafa kunye nam
Ndiya eholideyini ukuya Bueu, kwibhanki esezantsi ye Ichweba lasePontevedra, qho ngoJuni ngaphezulu kweminyaka engama-20. Y umnqamlezo weVigo osuka kwiCangas ndibona ibhulorho ye Uluhlu ecaleni kunye neziqithi IiCíes enye yeyam enye ye olona lonwabo lukhulu unyaka wonke.
Ngokwenene ngezo ntsuku eGalicia zihlala zibalaseleyo enyakeni. Ngenxa yemozulu, ukutya, abantu kunye nomculo kwisandi sayo kunye nembonakalo yomhlaba yahluke ngokupheleleyo kwimihlaba yam eyomileyo nethe tyaba yemvelaphi. Ke ekuhambeni kwexesha Nangona ndizalelwe itshizi yaseManchego, ndiziva ingathi yingwane ku feira.
Yiyo loo nto ngenye imini la nxalenye yentliziyo yam yaxhuma xa, kwivenkile yeencwadi kwaye ndikhangela ngaphandle kokukhangela nantoni na, ndabona iincwadi ezimbalwa ezinamaqweqwe amnyama namhlophe kunye nezihloko ezinomtsalane. Ndiphakamise enye kwaye kwiphepha elingasemva ndifunde amagama anje IVigo okanye iPanxón. Nye Amehlo amanzi ixhoba lalivela eBueu, kwaye kwi Ulwandle lwarhaxwa isiganeko senzeke ePanxón, ke Khange ndithandabuze ukuzithatha.
Emva koko ndadibana nabalinganiswa: Umhloli Leo Caldas, egcinwe, enesidima, yamagama ambalwa, ezolile, yobomi bobuqu obuncamileyo kwaye ephawulwe lulwalamano noyise kunye nokufa kukanina kwangoko. Unomncedi, URafael Estévez, waseZaragoza, I-193 iisentimitha zesandla esomeleleyo nesithe nkqo, somsebenzi onzima omngenise ngaphezulu kwengxaki enye kwaye wamzuzela uhlobo elubhacweni eGalicia ngokudityaniswa: loo nto yokuba kufuneka ujongane nengqokelela yamaqhalo yaseGalicia edla ngokungamthandi.
Baye bahlala kancinci kum Ndathandana kabuhlungu no-Leo Caldas Kwaye ndiya kulithanda ngonaphakade irhamncwa elimnyama likaRafael Estévez, indawo yokulwa egqibeleleyo kwesi sibini samapolisa njengawethu ngokwahlukileyo. Ngoku ndiyityile neyesithathu kwaye, ngendlela, bezikhula ngobukhulu nakwabafundi.
Ukunikezelwa kwe Inqanawa yokugqibela eMadrid-Matshi 25 -Casa de Galicia
Ekubonisweni kwale noveli yesithathu, UDomingo Villar wayencokola nentatheli uSusana Santaolalla phantse iyure. Kakhulu ndonwabile kwaye ndinentloni Ekuqaleni, uVillar wabonisa imvakalelo ephindwe kabini ye ukungakholelwa kunye nokungaqiniseki kakhulu kwi ulwamkelo yencwadi emva kwexesha elininzi kuba kuba kwangelo xesha linye ibimiselwe yona ndiyalibala. Akukho nto iqhubekayo kwinyani. Yayingu impumelelo kwangoko ekugxekeni kuwo onke amanqanaba nakwiintengiso.
UVillar usixelele malunga kutheni ithathiwe Iminyaka elishumi yokukhupha le ncwadi yesithathu, eyayinesihloko sokuqala Amanqamlezo amatye. Ukuqhuma endleleni, ukusweleka kukatata wakhe, yamenza waphinda wacingisisa ngoko akubhalileyo. Ke ndagqiba kwelokuba ndiqale phantsi. Kuba njengoko thina babhalayo sisazi kakuhle, xa ii-muses zithatha iholide, zivimba okanye zingakuhoyi, kuya kufuneka unike ixesha. Kwaye ibali ngalinye linalo.
Uphinde wathetha ngenkqubo yendalo, yintoni Inzima kwaye iyakhathaza Oko kunokuba ngamanye amaxesha. Kwaye siyazi malunga noku. Kuthatha iminyaka eli-10 ukuzoba kunye nokumisa iminyhadala, imeko-bume kunye nabalinganiswa obeka etafileni imvakalelo ofuna ukuyihambisa umfundi. Kwaye ufuna ukufezekisa elo bali lihlala likhulelwe kwaye uthathe, okanye uthathele ingqalelo ngonaphakade, abalinganiswa babo njengabahlobo babo.
Ke ngoku kuthatha kuphela iintsuku ezimbalwa ukuba abafundi bayikhuphe. Mna khange ndithathe iiveki ezimbini, Kwaye ngenxa yokuba bendisoloko ndibeka amathuba okufunda, ke ngoko, anqwenelekayo, alungile kwaye alungiswe kakuhle, kuya kufuneka uqhubeke ewe okanye ewe ngokukhawuleza nje xa uqala.
Kwenzekile kwaba babini bangaphambili, ke ayinakuba njani ngoku? Kwaye ulibale? Libala lonto Imvula yeVigo, Ukuba ichweba izimvi emafini nolwandle kuman ', abo umahluko phakathi kwedolophu nasezilalini? Ulibale ububele, ukulula, imfesane kunye nesizungu ye-Leo Caldas enesingqala? Ubumnandi kunye nothando lwe utata wakhe? Kwinto enganyamezelekiyo ISantiago Losada? Ukusebenza UClara Barcia? Kumkomishinala Soto? Libala lonto isilwanyana sasendle nguRafa EstévezNgubani ozithiyileyo zonke izinja ezisehlabathini kwaye ongenakwenzeka ukuba angazinquli?
Hayi, bonke abalinganiswa abenziwe kakuhle kwaye baboniswa abayi kulityalwa. Njengoko iimbali kunye nabalinganiswa yesibini, kwaye i iyelenqe ikhulelwe kakuhle kwaye yalukwa ibe mbalwa iimeko njengabalinganiswa abaphambili.
Ukufota: (c) U-Ediciones Siruela kwi-Twitter.
Imixholo, abalinganiswa, iindlela zokuzonwabisa zombhali
UVillar wakuvuma oko Bendixakiwe. Kodwa yinto eyenzekayo xa izinto zenziwe kakuhle, nokuba kuthatha ixesha elingakanani ukuzenza. Ewe, into esimbuze yona yileyo sukulinda eminye iminyaka eli-10 elandelayo inoveli. Ngokuqinisekileyo sele ndifuna ngaphezulu.
Uqhubekile ephawula nge iyelenqe elitsha, abalinganiswa kunye nemixholo kule noveli yesithathu: ezininzi kwaye zahlukile ubudlelwane phakathi komzali nomntwana, la isizungu kwisixeko esixineneyo enokuboniswa ingenanto yi ukungakhathali ngokubhekisele kwabanye njengabantu abangenamakhaya nabangenamakhaya. Okanye, kwezona ndawo zasemaphandleni, ukwaliwa noloyiko ngokubhekisele kwabo kuthiwa eyahlukileyo.
Wathetha nangezo iindlela zokuzonwabisa ulwazi lomntu ngamnye ngombhali, njengolwakhe funda ngokuvakalayo le nto uyibhalayo ngakumbi okanye ngaphantsi abaphulaphuli abasondeleyo abanika uluvo lwabo okanye isikhokelo okanye bamamele ngokulula. Ukuphendula umbuzo wentatheli, wathi angakwazi bhala ngesiGalician nangeSpanish, ngakumbi iingxoxo. Kwaye uqhubeka njani ke epholisha kwaye elungisa iinguqulelo kwisicatshulwa sokugqibela.
Kwaye ke wathetha ngalonto ezihlekisayo Kukwincwadi yakhe yamanoveli. Oko I-retranca yaseGalician ethi "baphosa kuthi ngexesha lokuzalwa" yintoni ngoku Uphawu lwendlu. Uburharha obukhanya ngakumbi kuloo nto counterpoint ngobuchule phakathi kwazo zonke Abalinganiswa baseGalician kunye nongekhoyo: URafa U-Estevez.
Ngaba ifayile ye- Enkosi kwaye ndonwabile enkosi kusapho, kubahlobo, kubahleli nakwabafundi ngeli xesha lokulinda kunye nomonde ngalo msebenzi ulilolo nangaphakathi obhalayo. Ndiyabulela mutual ngabahleli kwaye, ewe, ngabo bonke abazimeleyo.
Kwindawo eyaziwayo sayina Emva kokugqiba isenzo, uVillar wazimasa nathi ngobubele, kunye naye "Enkosi" Ndidumisa, ndincome kwaye ndibulele ngamabali abo ukugqiba ukuchukumisa komnye wale mizuzu yokubhala osele uyixabisile intsalela.
Nabani na owaziyo iVigo ngaphaya kwabemi bayo baya kuyibona loo nto indawo yokuhlala enqabileyo ukubekwa ecaleni kolwandle. Kukho i saxophonist, Ngamehlo aqaqambileyo atsalele umnxeba ULuis Reigosa, kuvela wabulawa ngobubi obukhomba kulwaphulo-mthetho lokuthanda. Kodwa hayi akukho nto kwindawo yolwaphulo-mthetho, akukho nyathelo, akukho zimpawu zokulwa, okanye nabuphi na ubudlelwane bomntu obukrokrelwayo
Kule noveli yesibini sele ikhona banzi ngakumbi sinokufumana isidumbu sendoda Elunxwemeni lwePanxón. Yeyakhe UJusto Castelo, un umatiloshe ukuvela eboshwe izandla. Akukho amangqina kwaye akukho mkhondo yesikhephe somfi. Iya kuba luphando olunzima kakhulu kuba wonke umntu uthulisa ukukrokrela kwabo okanye ukubaphambukisa kwiindlela ezinzima kakhulu.
Ukusuka kweli bali a ukulungelelaniswa okuhle kwefilimu Ngo-2015 obeka ubuso kuCaldas no-Estévez kwezo UCarmelo Gómez kunye no-Antonio Garrido.
Ukunyamalala kwentombazana encinci, UMonica Andrade, Intombi kagqirha owaziwayo kwaye uhlala eTiran, ecaleni kukaMoaña, uyabandakanyeka imfihlakalo Ukususela ekuqaleni. Ndisebenze kwi Isikolo seVigo sobugcisa kunye nezobugcisa, wayengenasizathu sicacileyo sokuhamba okanye iintshaba ezazisongela. Okanye mhlawumbi ewe.
La uphando olunzulu U-de Caldas y Estévez uthatha amanyathelo abonakala elahlekile kumawaka elinokwenzeka kunye neelebheli kuye wonke umntu njengabarhanelwa. Ukwengeza, ubomi bakho yamapolisa amabini Baza kuba neenguqu ezininzi abafundi abaninzi ngokuqinisekileyo sele bebulele.
Ukuba awukayifundi okwangoku, kuya kufuneka uqale ngoku. Eyakhe umgangatho wokubhala kunye nokufunda kwayo okukhawulezayo Is syntax icacisa gca njengoko kucacile. Kwakhona ezo izahluko ezimfutshane Kwaye ihlala yaziswa ngophawu lwendlu Iintsingiselo ezahlukeneyo zegama yintoni ekuzo.
Kodwa ngaphezulu kwako konke ngenxa yomthamo dungene kwindawo esondeleyo kodwa enenkungu kunye nokuchukumisa umlingo endihlala ndizidibanisa nayo Terra yaseGalician. Kwaye malunga abalinganiswa ewe, baba ngabahlobo bakho ukusukela oko wahlangana nabo okokuqala, kwabo uhlala ucinga ukuba ndinqwenela ukuba babekhona ngenene ngobunyani bayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » IDomingo Villar. Ukunikezelwa eMadrid kwesikhephe sokugqibela. Indlela yakhe trilogy
Udliwanondlebe noRicardo Alía, elinye lamagama amakhulu kwinoveli yolwaphulo-mthetho eSpain.